दुई हजारभन्दा माथि फिल्म हेरेको छु–निश्चल बस्नेत - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ०९, २०७२ समय: १६:२७:५२
फिल्मको परम्परागत कथावाचनबाट पर गएर ‘लुट’ र ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ निर्देशन गरेका निश्चल बस्नेत निर्देशक मात्र होइनन्, सफल निर्माताका रुपमा समेत स्थापित भइसकेका छन् । उनको ‘ब्ल्याक हर्स पिक्चर्स’ ब्यानरमा बनेका सबै फिल्म उत्तिकै सफल छन् । उनकाे परिचय अभिनेता र गायकसँग पनि जाेडिएकाे छ । ‘सिनेमा आर्ट नेपाल’सँग मिलेर उनले बनाएको ‘कबड्डी कबड्डी’ आउँदो ११ गते रिलिज हुँदैछ भने ‘तान्द्राे’ रिलिजकाे पर्खाइमा छ । यही सेरोफेरोमा निर्देशक/निर्माता बस्नेतसँगको सिनेमा संवाद–
तपाईँले पहिलो पटक हेरेको फिल्म कुन हो?
सानोमा के–के हेरियो याद छैन । तर, सानै छँदा हलमा गएर ‘दुई थोपा आँशु’ हेरेको अझै झल्झली याद आउँछ । त्यसपछि ‘साइनो’ को याद आउँछ ।
सम्झना छैन ।
अहिलेसम्म कतिवटा फिल्म हेर्नुभयो होला?
हजारौं हेरियो होला । जेहोस् दुई हजारभन्दा माथि नै हेरेँ होला ।
फिल्म किन हेर्नुपर्छ?
अरुको लागि त थाहा भएन तर मचाहिँ ‘इन्सिपिरेसन’ हेर्छु । विचार निर्माणका लागि हेर्छु । नयाँ केही भेटिन्छ कि भनेर हेर्छु । मेरो लागि त फिल्म हेर्नु मेडिटेसनजस्तै हो ।
तपाईँका लागि फिल्म के हो?
म यदि फिल्म क्षेत्रमा थिइन भने त मनोरञ्जनको एउटा साधन मात्र हुन्थ्यो होला । अहिले भने फिल्म मेरो लागि जीवन अगाडी बढाउने माध्यम भएको छ । फिल्म मेरो लागि वरीपरि आफूले देखेको कुरा व्यक्त गर्ने माध्यम हो ।
फिल्म हेरेर के सिक्नुभयो?
यही सिकेँ भन्ने त नहोला । जेहोस्, सोच्न बाध्य बनाइदिनछ । यो बनाउनले कसरी सोचेर बनायो होलाजस्तो लाग्छ । त्यस्तो फिल्म हेरेर म पनि यस्तै फिल्म बनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । जे होस् मेरो फिल्ममा अलिअलि भएपनि मेरो आफ्नो भोगाई हुन्छ ।
फिल्म हेर्दा विशेष केमा ध्यान दिनुहुन्छ?
पहिले कथा र त्यसको प्रस्तुतिकरण हेर्थें । अहिले ‘बिहाइन्ड द सिन’ सोचेर हेरिन्छ । निर्देशकले कसरी काम गरेको छ त भन्ने ध्यान दिन्छु । प्राविधिक पाटोमा आँखा घोत्लिन्छ ।
कुन माध्यममा फिल्म हेर्न रुचाउनु हुन्छ?
सकेसम्म त हलमै हेर्ने हो । तर, धेरै त सिडीडिभिडीमा हेरेको छु । अचेल त इन्टरनेटमा हेर्छु ।
फिल्म कसरी छान्नुहुन्छ?
‘सिनोप्सिस’ हेरेर छान्छु । कहिले त पोष्टर कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ । पहिलेपहिले त रेटिङ या समिक्षकको समिक्षाबाट छान्थेँ ।
आदर्श नायक नि?
ठ्याक्कै यही भन्ने छैन । तर, एक समय ज्याकी चेनका प्रायः फिल्म हेर्थेँ ।
तपाईंँका लागि आदर्श खलपात्र को हो?
पछिल्लो समय आफ्नै फिल्म लुटको ‘हाकुकाले’ । ‘इन्सेप्सन’ मा लियोनार्दो डिक्याप्रियोको भुमिका पनि मलाई मन परेको हो ।
कुन फिल्मी चरित्रसँग आफूलाई नजिक पाउनुहुन्छ?
निर्देशकले आफैंजस्तो गर्नु है भनेकाले मलाई त आफैंले खेलेको फिल्म ‘कबड्डी’ को आफ्नै पात्रसँग नजिक छु जस्तो लाग्छ ।
कस्ता फिल्म मन पर्छन्?
फेष्टिभलमा छानिएका र अवार्ड पाएका फिल्म मन पर्छन् । त्यस्तै फिल्मले त हुन् सोध्न बाध्य बनाउने ।
पछिल्लोपटक हेर्नुभएको फिल्म, जसले तरंगित बनायो ।
धेरैपटक हेरेको फिल्म?
म दोहो¥याएर कमै फिल्म हेर्छु । ‘इन्सेप्सन’ पहिलोपटक हेर्दा त पागलै बनायो । त्यसपछि दोहो¥याएर हेर्दा मात्र बुझेँ ।
फिल्ममा आउनुभन्दा अघि । सन् २००५ देखि २००९ को पिरियडमा प्रत्येकदिन तीनवटासम्म हेरेँ । त्यतिखेर त चाइनिज, फ्रेन्च फिल्महरु सबटाइटल नराखि म कथा कत्तिको बुझ्न सक्छु भनेर आफूलाई जाँच्न हेर्थेँ ।
मन पर्ने निर्देशक जसको तपाईं डाइहार्ट हुनुहुन्छ?
एक समय म क्वान्टिन टोरेन्टिनोका स्क्रिप्टहरु पढ्थेँ । उनी लेखन र निर्देशन दुवैमा पावरफुल लाग्छन् । सुरुमा मलाई तुलसी घिमिरे दाई मन पथ्र्यो । दर्पण छायाँसम्मका फिल्महरु मलाई मन परेका हुन् ।
फिल्म हेर्दाका कुनै रोेचक घटना छन्?
बाहिर बस्दा एउटा थ्रिडी फिल्म ल्याएर हेर्दा लगाउनुपर्ने चस्मा नै अर्को परेछ । तिरिमिरी आँदा पनि हेरिरहेँ ।
पछिल्लो पटक कुन फिल्म हेर्नुभयो?
जेम्स बण्डको ‘स्पेक्ट्र’ हेरेँ । टाउकै दुखायो । मलाई त बण्ड फिल्मजस्र्त लागेन ।